Momba anay - Ningbo Yingyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Ningbo yingyi machinery manufacturing Co., LTD. Orinasa varotra vahiny miompana amin'ny varotra fanafarana sy fanondranana.
Ny orinasa dia mirotsaka amin'ny ampahany milina, Hardware vokatra, Aluminum maty-fanariana. zinc die-casting sy ny ampahany metaly hafa, Stamping faritra, Forging faritra, Auto faritra, lamasinina faritra, Valve faritra.
NY TEKNOLOJIA FITONDRANA MAITSO
NY TOMBONY AVY VERY FOAM Casting
Ny teknolojia fanariana foam very dia manambatra ny modely plastika mitovitovy amin'ny endrika sy ny endrik'ilay fanariana ao anaty cluster modely, izay rakotra coating refractory sy maina, mihozongozona amin'ny fasika quartz maina, ary arotsaka amin'ny metaly ranon-javatra amin'ny fepetra sasany hanaovana izany. Ny modely amin'ny tontolo iainana avo lenta, ny ranon-javatra metaly dia etona ary lysed. Ny entona triatra dia avoaka amin'ny alalan'ny coating, ka ny metaly anidina dia mitana ny toeran'ny modely, ary ny fomba fananganana ny tiana fanariana aorian'ny fanamafisana sy ny fampangatsiahana, ho an'ny fanariana foam very, misy anarana maro samihafa. Ao Shina, antsoina hoe "fasika maina fanariana mafy" na "ratsy compaction fanariana", ary raha Etazonia & Eoropa anarana hoe "very foam fanariana".
Raha ampitahaina amin'ny teknolojia fanariana nentim-paharazana, ny teknolojia fanariana foam very dia manana tombony tsy manam-paharoa, noho izany dia noderaina ho "ny teknolojia fanariana tamin'ny taonjato faha-21" sy "ny revolisiona maitso amin'ny indostrian'ny fandrefesana" ny indostrian'ny fanariana ao an-trano sy any ivelany.
1. Ny refy fanariana dia marina sy mifanaraka.
2. Malambolambo ambonin'ny fanariana.
3. Tsy ilaina ny ampahany fototra fasika, izay hanatsara tanteraka ny fanariana ny kalitaon'ny fanariana, fa ny fasika fanariana dia manana ny famokarana kilema risika mandritra ny fasika fototra fanaovana sy ny fanamboarana ny dingana fototra.
4. Sady tsy mitaky bobongolo akaiky na lasitra maka, izay manamora be ny lasitra dingana sy manala ny fanariana kilema sy ny fako vokatra vokatry ny lasitra fakana sy ady totohondry.
5. Famolavolana fasika maina tsy misy binder, tsy misy hamandoana ary tsy misy additives, mamongorana ny tsy fahampian-tsakafo isan-karazany sy ny vokatra fako vokatry ny hamandoana, additives ary binders.
6. Ny rafi-pitsaboana fasika dia nohamafisina be, ary azo averina tanteraka sy averina ampiasaina ny fasika mamolavola, manafoana ny sampan-draharahan'ny fanomanana fasika sy ny sampana fitsaboana fasika fako.
7. Tena mora ny fasika mianjera, mampihena be ny enta-mavesatra sy ny hamafin'ny asa amin'ny fasika mianjera.
8. Ny fanariana foam very dia manana lanja azo antoka ary kely kokoa ny taham-pahavitrihana, izay manampy amin'ny fampihenana ny lanjan'ny fanariana manta sy ny fampihenana ny vidiny raha oharina amin'ny fanariana fasika nentim-paharazana.